DEG DEG: Madaxweyne Deni oo digreeto uu caawa soo saaray ku kala diray golihii deegaanka degamda Ga..
Puntlandtimes (Garoowe)-Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Xeer Madaxweyne Lr. 01, ku kala diray Golaha Deegaanka degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, Madaxweynaha Dowladda Puntland. Markuu arkay:
Dastuurka Dowladda Puntland qodobkiisa 123‐aad, farqaddiisa 4-aad. Markuu arkay: Xeerka maamulka degmooyinka iyo Gobolada (Lr – 7 ) ee Dowladda Puntland qodobkiisa 27-aad, farqaddiisa 5-aad Markuu arkay:
Warbixinta Xafiiska Hantidhawrka Guud ee Dowladda Puntland Markuu arkay: Talo soo jeedinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dimuquraadiyaynta Puntland Markuu tixgeliyey:
Gun-gaarka Maxkamadda Sare ee ku saabsan kala dirista Golaha Deegaanka degmada Gaalkacyo. Wuxuu Xeeriyey 1. Waxaa la kala diray Golaha Deegaanka Degmada Gaalkacyo 2. Xeerkani wuxuu dhaqan-gelayaa markuu Madaxweynuhu saxiixo, wuuna saxiixay Madaxweynuhu.
Maxaa loogu dowgalay oo ay galabsadeen.
Reer mudugu waa dad xadaarad leh, waxay bilaabeen doorasha xubnaha aqalka sare uga qaybgalaya, Deni taasuu kaxanaaqay
Deni dadka uu maamulaa AYAAN DARANAA!
Kollay kuwa degaankaaga Guriceel kunool way KA AYAAN BADANYIHIIN!
Waxaan hubaa reer Gaalkacyo ineey ka ayaan iyo nasiib wanaagsan yihiin dadka ku nool
4 caabudwaaq kkkkkkkkkk
Marka aan waxaan oo kale arko ayaan puntland ka Rajo dhigaa.
Ninkii xininyaha lasoo baxay ayaa shaqadii laga fariisiyey oo lagu badalay kuwa hooskooda ka cararaya. Mise ninkaan baaba laga baqayaa oo laysyiri carmuu anagana na raamsadaa marka uu waayo shayaadiin uu raamsado. Bal aanu sugno waxa uu Deni qiil ka dhigto.
Ali fulay MJ yaa u xaniinyo waaweyn beesha daarood markey arkaan barida weyna jeediya markey Isaaq iyo Hawiye arkaan wallee Ali waa kuwii barida waaweynaa bal arag wuxuu la soo booday hadiiba xin iyo xanuun dhulbahante iyo mareexaan, oo ah xinkii iyo hinasihii ay la dhimatay naagtii iyadoo uurka leh u timid reerka oo odogii u qarisay amxaarkii caloosha u soo buuxiyay maxaad ka filan kartaa dhasheedii.